नेपाल आज | कोरोनावाट वच्ने निर्विकल्प सुत्र - प्राकृतिक चिकित्सा (भिडियोसहित)
समाचार भिडियो स्वास्थ्य समाज
कोरोनावाट वच्ने निर्विकल्प सुत्र - प्राकृतिक चिकित्सा (भिडियोसहित)
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व नै आतंकित र त्रसित भईरहेका वेला नेपालका एक जना चिकित्सकले भने प्राकृतिक चिकित्साका माद्यमवाट कोरोनावाट वच्न सकिने दावी गरेका छन् ।
वेलनेस अस्पतालका संस्थापक डा. जनकवहादुर वस्नेतले हालसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन वनिनसकेको र हरेक पद्धति असफल भएको वेला प्राकृतिक चिकित्सा पद्धती नै कोरोनावाट वच्ने निर्विकल्प विधि भएको दावी गरे। ‘शरिरमा रोगसँग लड्ने क्षमता (इम्युनिटी पावर) वढाउनु नै कोरोनावाट वच्ने सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो। यो कुरा डब्लुएचओसहित सवैले मानेका छन्’ उनले भने–‘अहिलेसम्मका अधिकांश कोरोनाका संक्रमितहरु इम्युनिटीकै कारण निको भएका हुन्।’
मान्छेसँग अहिले कोरोनावाट वच्न ‘भाग्ने वा लड्ने’ दुईटा मात्रै विकल्प रहेको उनको भनाई छ । हात धुने, एक आपसमा दुरी कायम गर्ने र सेनिटाईजर प्रयोग गर्ने भाग्ने कार्य हो भने संक्रमण भईहाले त्यससँग लड्नुको विकल्प नभएको उनले वताए । प्राकृतिक चिकित्साले कोरोना निको पार्ने भन्दा पनि संक्रमणवाट वच्न शरिरमा इम्युनिटि पावर वढाउने उनको भनाई छ । ‘प्राकृतिक चिकित्साले कोरोना निको पार्न सक्छ भन्ने होईन। अहिलेसम्म कुनै पनि विधिले त्यसलाई निको पार्छ भन्ने आधार र प्रमाण छैन’ उनले थपे–‘तर, डब्लुएचओसहित सवैले मानेको कुरा के हो भने रोगसँग लड्ने क्षमता वढाउनु नै भारसवाट वच्ने उपाय हो । र अव आउने भनिएको भ्याक्सिनले पनि भाइरस मार्ने नभएर इम्युनिटि वढाउने नै हो। त्यो कुरा खानपान, एक्सरसाईनजलगायत प्राकृतिक तरीकावाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। इम्युनिटिकै कारण हामी रोगसँग लडन सक्छौ।’
शरिरमा इम्युनिटि वढाउने काम प्राकृतिक उपचार विधिले नै सम्भव भएको उनले दावी गरे । ‘केहि प्राकृतिक चिकित्सालयहरुले कोभिडको क्षेत्रमा काम गरीरहेका छन। त्यहाँ भएका रिकभर रेट हेर्नुभयो भने धेरै छिटो भईरहेको छ’ वस्नेतले भने–‘त्यसले यो कुरालाई प्रमाणति गरेको छ। कोरोनासँग लड्नका लागि यो जत्तिको इफेक्टिभ टुल्स अर्को छैन ।’
कुनै औषधीको प्रयोग नगरी, शल्यक्रिया नगरी, सुई नखोपी गरिने उपचार विधी प्राकृतिक चिकित्सा हो। यो सस्तो, सरल, प्रभावकारी र हानीरहित चिकित्सा विधि पनि हो। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृतिवादी सिद्धान्तमा आधारित छ। ‘मानव प्रकृतिको देन हो। त्यसैले हामी प्रकृतिको जति उपयोग गर्छौ वा प्रकृतिको नियम जति पालना गर्छौ त्यति नै स्वस्थ हुन्छौं’ वस्नेत भन्छन्–‘जव प्रकृतिको नियम उलंघन हुन्छ तव मानिस रोगी हुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सा यहि सिद्धान्तमा आधारित छ।’
यो विधिमा प्रकृतिमा उपलब्ध चिजहरु माटो, पानी, हावा, घाम र आकाश (जसलाई पञ्चमहाभुत भनिन्छ) को प्रयोगद्वारा उपचार गरिन्छ। प्रकृतिको गुणलाई नविगारी जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुका साथै खानपान, जिवन सैली र एक्सरसाईज लगायतका विधिवाट उपचार गरीने विधि नै प्राकृतिक चिकित्सा हो। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोगमुक्त जीवन बाच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुन्छ । प्राकृतिक रुपमै बलियो, निरोगी, तन्दुरस्त हुनु पहिलो सर्त हो । रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन नै सर्वोत्तम हुने वस्नेको भनाई छ ।
समग्रमा प्राकृतिक चिकित्सा विजातीय पदार्थको सिद्धान्तमा आधारीत छ । यसले दुई वटा कुरालाई ध्यान दिन्छ । पहिलो कुरा, रोग लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो शरिरमा फोहोर जम्मा हुनु हो। वाहिरी वातावरण फोहोर भएपछि रोग लाग्छ भन्ने सवैलाई थाहा छ। तर, वाहिरको वातावरण भन्दा शरिर भित्रको वातावरण महत्वपुर्ण हुन्छ । भित्रको वातावरण फोहोर हुनुलाई विजातिय पदार्थ जम्मा हुनु भनिन्छ। शरिर भित्र फोहोर जम्यो भने शरिरमा ब्याक्टेरीया, भारस लगायतका किटाणुले आक्रमण गर्छ अथवा शरिरको सिस्टममा अवरोध हुन्छ। त्यसपछि मात्र रोग लाग्छ। त्यसैले भित्रको आन्तरिक सफाई गर्नु प्राकृतिक चिकित्साको एउटा मुख्य सिद्धान्त हो। यसले शरिरको भित्री सफाई गर्छ ।
यसैगरी, शरिरमा रोगसँग लड्ने क्षमता (जसलाई प्राकृतिक चिकित्सामा– जीवनी शक्ती र आधुनिक चिकित्सामा इम्युनिटि भनिन्छ’ वृद्धि गर्नु अर्को सिद्धान्त हो। ‘यसरी प्राकृतिक चिकित्साले एकातर्फ भित्री वातावरण सफा गर्छ वा विजातीय पदार्थलाई क्लिन गर्छ । अर्कोतर्फ जिवनी शक्तिलाई वढाउछ र कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्छ’ वस्नेत भन्छन्–‘जीवनी शक्तिले रोग लाग्न दिदैन र लागि हालेपनि त्यो सँग लड्छ मद्धत गर्छ ।’
प्राकृतिक चिकिस्सासहित मुलुककको समग्र स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा वेलनेस अस्पतालका संस्थापक डा. जनकवहादुर वस्नेतसँग नेपाल आजले गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस।